Iza ireo Quamina sy Jack Gladstone? - Foundation Afrikhepri
Fikomiana amin'ny andevo
Qmpandrafitra i uamina fony voasambotra tany Afrika izy. Izy sy ny zanany lahy no nitarika ny fikomiana Demerara tao 1823, iray amin'ireo fikomiana andevo lehibe indrindra tany amin'ireo zanatany anglisy. Raha ny fitantaran'ny mpahay tantara dia i Quamina sy ny reniny dia voasambotra tany Afrika tany antenatenan'ny taonjato faha-18. Ny reniny dia maty tao amin'ny toeram-pambolena tamin'ny 1817. Nianatra namaky teny sy nanoratra i Quamina. Noho ny faharanitan-tsainy sy ny fahendreny dia nanaja azy ny andevo maro. Nihaona tamin'ny andevo iray i Quamina izay navotsotry ny tompony antsoina hoe Peggy izay nanana an'i Jack zanany lahy. Satria teo ambany baikon'ny tompo maromaro i Quamina, maro no nitondra azy toy ny andevo rehetra, nanala baraka azy ary nikapoka azy. Indray mandeha nokapohina mafy izy ka nalemy ary tsy afaka niasa nandritra ny enina herinandro. Noteren'ny tompony hiasa izy. Tamin'ny 1822, rehefa narary mafy i Peggy, dia mbola voatery niasa tontolo andro, isan'andro ihany izy. Voarara ny hikarakara ny vadiny. Indray hariva dia nody izy ary hitany fa maty.
Taorian'ny fahafatesan'i Peggy, Quamina dia lasa akaiky an'i Jack zanany lahy izay efa lehibe ary naniry ny ho olona afaka tamin'ny fomba rehetra, miomana amin'ny fikomiana. Nanaja ny fikasan'i Jack i Quamina tamin'ny voalohany saingy nihevitra izy fa misy dikany amin'ny torohevitra amin'ny zanany lahy sy ireo andevo hafa mba tsy hikomy amin'ny herisetra fa hitokona tsy amin-kerisetra. Jack nohenoin'ny andevo maro, manodidina ny 10.000. Nataony hikomy amin'ny tompony izy ireo. Quamina noho ny fitiavany ny zanany lahy dia niafara tamin'ny fandraisana anjara tamin'ny antony. Ny taonan'ny Jack tamin'ny fotoana fikomiana dia tombanana ho telopolo. Ny fikomiana dia natomboka tamin'ny tsy herisetra araka izay nilain'i Quamina. Ireo tompona orinasa sy ny fianakaviany dia tsy novonoina na naratra fa nogadraina.
Taorian'ny nandresen'ny andevo tamin'ny ady feno rà tamin'ny tafika britanika tamin'ny "Bachelor's Adventure" dia nandositra tany anaty ala i Jack ary nisy valisoa nomena an'izay misambotra an'i Jack rainy, sy ireo mpandositra 20 eo ho eo. Jack sy ny vadiny dia voasambotry ny kapiteny britanika tamin'ny 6 septambra 1823, taorian'ny fanenjehana 3 ora. Mbola tany malalaka i Quamina mandra-pahazoana azy tamin'ny 16 septambra ihany.
Novonoina izy ary ny fatiny dia nohanton'ny gadra teny amin'ny kianjam-bahoaka tsy lavitra ny voly fambolena izay niasany talohan'ny fikomiana. Notsapaina i Jack sy ny vadiny ary nalefa tany Saint Lucia. Quamina dia heverina ho maherifim-pirenena any Guyana. Avenues ao Georgetown no nomena anarana azy ary nisy tsangambato natsangana hanomezam-boninahitra azy eo anelanelan'ny araben'i Quamina sy Carmichael ao Georgetown.
Ny lakilenanao amin'ny harena - Napoleon Hill (Audio)